e-ọgụgụ na ịrị elu | Martech Zone
Tọzdee, Septemba 20, 2012 Douglas Karr
Anyị edeela banyere itinye n'ọrụ e-akwụkwọ maka ahịa n’oge gara aga, mana ọnụọgụ ọhụrụ mere ka mbadamba mbadamba na e-Reading na-aga n’ihu.
Ndị nwere e-agụ akwụkwọ na-agụ karịa ka ha nwere ike ọ gwụla, dịka e gosipụtara na ahịa e-akwụkwọ na-arị elu. N'ihi nke a, e-agụ ahịa na-abawanye. Dị ka otu nnyocha e mere na mbido 2012 si kwuo, 13% nke ndị ahụ nyochara kwuru na ha nwere ike ịzụta onye na-agụ akwụkwọ na ọnwa isii na-esote. Site na Infographic, Bilie nke eRing
Buru n'uche na ọnụahịa nke ngwaọrụ ọhụụ na-aga n'ihu na-ada kwa. N’ebe na-erughị ekwentị mkpanaaka, ndị mmadụ nwere ike ịzụta eReader. Soro mmụba na eReading bụ chọọ ePublications. Ebe ọ bụ na a na-eri ọdịnaya ahụ ngwa ngwa ka emepụtara ya, ị nwere nnukwu ohere ịpụ na igwe mmadụ site na ịnọ na nsonaazụ ọchụchọ ndị ahụ.